TriCaster®အဆင့်မြင့် Edition ကို Upgrade Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအိုင်ပီဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုစှမျးဆောင်ကြဉ်း - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » TriCaster®အဆင့်မြင့် Edition ကို Upgrade Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအိုင်ပီဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုစှမျးဆောင်ကြဉ်း
San Antonio, မတ်လ 31, 2016-NewTek ™ ယနေ့သိသိသာသာ update ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ TriCasterÒအဆင့်မြင့် Edition ကို, TriCaster 8000, 860, 400 နှင့် Mini စီးရီးများအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲကို option ကို။ အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ် 100 ကျော်အော်ပရေတာ-ဗဟိုပြုစွမ်းရည်နှင့်အတူ, TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကိုယခုပရိသတ်တွေကြီးထွားအမှတ်တံဆိပ်စံချိန်စံညွှန်းများခြီးမွှောနှင့်တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုကယ်တင်ကူညီအဆင့်မြင့်အိုင်ပီ Workflows နိုင်ပါတယ်။ များစွာသောသစ်ကိုဘက်ပေါင်းစုံ features တွေ, TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကိုသုံးကိရိယာ၏ဤ update ကိုများထဲတွင် NewTek'' s ကိုကတခြားချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူတိုက်ရိုက်အိုင်ပီပေါင်းစည်းမှုကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကဗီဒီယို, ကွန်ယက်စက်ပစ္စည်း Interface (NDI ™) နည်းပညာ groundbreaking အသုံးပြုသူများသည်အနိမ့်အောင်းနေချိန်နှင့်အတူချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်ခွင့်။
TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကိုယခုလက်ရှိအရေအတွက်လေးအပိုဆောင်းပြင်ပသွင်းအားစုကထပ်ပြောသည်, နှင့် IP မှတဆင့်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုနီးပါးန့်အသတ်အရေအတွက်ချက်ချင်း access ကိုကယ်တင်တတ်၏။ တိုင်းပြင်ပ input ကိုယခုဒေသခံဟာ့ဒ်ဝဲ connectors သို့မဟုတ်မရေမတွက်နိုင်သော NDI ကဗီဒီယိုသတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်စေမှဗီဒီယိုခံယူနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်စီ SDI, HDMI နှင့်အသံနှင့်အတူ Analog စဗီဒီယိုကို input ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခု NDI အရင်းအမြစ်အဖြစ်ကွန်ယက်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီအရင်းအမြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသော NDI-enabled စနစ်များကိုမှချက်ချင်းလက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကိုအပြေး TriCasters ပြင်သာပြောင်းသာအိုင်ပီနှင့်စနစ်ဟာ့ဒ်ဝဲရလဒ်နှစ်ခုလုံးမှတာဝန်ပေးအပ်နိုင်လေးအပြည့်အဝ Configure လုပ်လို့ရတဲ့ output ကို channel များကိုကယ်နှုတ်တော်မူ။ တစ်ခုချင်းစီကိုစက်ကိရိယာနှင့်သည့်စနစ်ကနေ NDI ပံ့ပိုးမှုများကိုဖန်တီးမှုနှင့်လက်တွေ့ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်အားလုံးထုံးစံကိုထောကျပံ့ဖို့, network ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုပုတ်နိုင်အရည်အသွေးမြင့်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦး matrix ကိုပါဝင်သည်။
NDI နှင့်အတူကအဆကိရိယာပြောင်းလဲနေတဲ့တည်နေရာ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရာ SDI Workflows ကျော်သာ incremental အကျိုးအတွက်ကယ်နှုတ်တော်မူသောအက high-bandwidth ကိုကွန်ရက်မှာအကုန်အကျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအကြားရှုပ်ထွေးပြီး unwieldy ဆက်သွယ်မှုဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ရရှိနိုင်သတင်းရင်းမြစ်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
"TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကိုမဆိုဗွီဒီယိုကို device ကိုမြင်မှသာ IP ကို ​​အသုံးပြု. အခြားမည်သည့်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အတွက်စစ်မှန်သောအိုင်ပီလုပ်ငန်းအသွားအလာ, ဖန်တီး, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှု၏အနာဂတ်မှာတူအဘယ်အရာကိုသရုပ်ဖော်" ဟုဒေါက်တာအင်ဒရူးလက်ဝါးကပ်တိုင်များအတွက်သမ္မတနှင့် CTO ဖြစ်သူကပြောပါတယ် NewTek။ "အတူတူကွန်ယက်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ tools တွေကို-ထုတ်လုပ်မှု Switcher, ပြန်ကန်, ကို virtual အစုံ, ဂရပ်ဖစ်စနစ်များရှိသမျှတို့, သုံးစွဲ, ဖမ်းယူနှင့် Skype ကိုဗီဒီယိုကစနစ်များ-ဆက်သွယ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အစွမ်းထက်ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဖွဲ့စည်းရန်ချောမွေ့စွာ။ ထိုအ NDI ထောက်ခံမှုကျော်လွန်ချဲ့ထွင် NewTekအရမ်း -centric ပိုက်လိုင်းများ။ စက်မှုလုပ်ငန်း NDI မွေးစားခဲ့သောနှင့်အတူလွှမ်းမိုးသောအမြန်နှုန်းနှင့်အနံဝမ်းမြောက်စေပြီးဖြစ်ပါသည်, နှင့် IP ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု Workflows အသွင်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူပါရုံကို validates ။ "
အားဖြင့် NDI စံ၏လွတ်လပ်သောလွှတ်ပေးရန်ကတည်းက NewTekကောင်းစွာ 200 ထုတ်လုပ်သူများနှင့် developer များကျော်က၎င်း၏ပစ်လွှတ်မှာ TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကို၏ဤလွှတ်ပေးရန် Device ရဲ့အကြီးအကျယ်အရေအတွက်ကိုနှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့ပေါင်းစပ်ပြီးသေချာသည်လှုပ်ရှားမှုပူးပေါင်းပါပွီ။
TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကိုအတွက်နယူးအင်္ဂါရပ်များ
မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုပရိသတ်တွေနှင့်ရောနှောမြင့်တက်ကူညီပံ့ပိုးအဖြစ်, ထုတ်လုပ်သူသူတို့ပူဇော်သည့်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ဖန်တီးမှုအားသာချက်နှစ်ခုလုံးကိုတိုးမြှင့်ချင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဘားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းပုံမှန်အားဖြင့်သိသိသာသာပိုပြီးစရိတ်, အာကာသ, မကြာခဏနောက်ထပ်သင်္ဘောသားလိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကိုအပို overhead မရှိဘဲ, တူညီတဲ့ထုတ်လုပ်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကိုဆောင်တတ်၏။
NDI နည်းပညာပေါင်းစပ်ဖို့အပြင်, TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကိုဆော့ဖျဝဲကဤအောင်မြင်မှုများစွမ်းရည်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပိုပြီး:
အရွယ်အစား, ဘယ်တော့မှမပြုလုပ်မီဗီဒီယိုလိုပဲရွှေ့နှင့် manipulate
TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကို, TriCaster 8000, 860 နှင့် 460 ၏ updated version ကိုအတူတစ်ဦးချင်းစီကိုသင်ခလုတ်ပေါ်မျိုးစုံ, ခေတ်မီဆန်းပြားသည့် Composition နှင့် DVE-စတိုင်ရွေ့လျားမှုပာဖန်တီးသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဆန်းသစ် full-ရွေ့လျားမှုဖွဲ့စည်းမှုအင်ဂျင်လက်ခံရရှိသည် M / e- ဘတ်စ်ကားနှုန်း 16 မှတက်။ တိုင်းစစ်ဆင်ရေး KEY ကို / DSK အလွှာဦးစားပေး (အတိမ်အနက်), positioning ကိုယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုး, အသွင်ကူးပြောင်းမှု, LiveSet သက်ရောက်မှုနှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်အဆင့်မြင့် configurations ၏ချက်ချင်းပြန်လည်သိမ်းဆည်း, supporting, M / E ကို busses, DSK နှင့် KEY ကိုအလွှာ, အခလုတ်ပေါ်ဖျော်ဖြေဒါတွေက comp ရလာဒ်ကဒိစတိုးဆိုင်။
TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကိုအသုံးပြုသူများခလုတ်သို့တည်ဆောက်ခလုတ်များနှင့်ထပ်ချန်နယ်များအတွက်အချိန်ပြည့် full-ရွေ့လျားမှုယုံကြည်မှုမော်နီတာအပါအဝင်, သူတို့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို update လုပ်ပေးခြင်းကနေ ပို. ပင်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိ; အသစ်က PREVIZ ဘတ်စ်ကားနှင့်အတူခလုတ်သို့မဟုတ်မည်သည့် M / E ကိုမှလွှဲပြောင်း sandbox 'စတိုင် Configuration နဲ့ဖွဲ့စည်းမှု; နှင့်ကို virtual set ကိုကင်မရာလှုပ်ရှားမှုများကိုတုံ့ပြန်ကြောင်း Real-time ကာတွန်းမှန်ဘီလူးနေမီးတောက်ထောက်ပံ့ LiveSet နည်းပညာမြှင့်တင်ရန်။
ခေတ်မီလမ်းကြောင်းများနှင့်ရောထွေး-အနုတ် configurations ဖွင့်ထားတဲ့အဆင့်မြှင့်အသံရောနှောပါဝင်သည်ကြောင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာတိုးမြှင့်မှုများ, နှုန်း-channel အသံ input ကိုအဆင့်ဆင့်၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်4အိုင်ပီ-အဆင်သင့်, Quad-ရုပ်သံလိုင်း busses မှအထွက်နှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပှား; M / E ကို output ကိုသို့မဟုတ် archive ကိုတစ်ဦး '' စင်ကြယ်သော '' option ကို; ထုတ်ခဲ့နေဆဲလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖမ်းပြီး; ပိုပြီးလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်အတူသင့်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကနေတိုက်ရိုက်မီဒီယာဝေမျှဖို့ Imgur, Linkedln, Vid.me နှင့် Vimeo နှင့်တိုက်ရိုက်တင်ပို့။
ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် Configuration ကိုဖြည့်စွက်
နှစ်ခုတဲဘ်တပ်ထား button ကိုဘဏ်များနှင့်အတူခလုတ်မှတိုက်ရိုက်တိုင်းကိုဗီဒီယိုအရင်းအမြစ်မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ, လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူတိုင်းထုတ်လုပ်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲ; တိကျစွာစီစစ်ခြင်းနှင့်ဗီဒီယို input ကိုသတင်းရင်းမြစ်များ၏အလိုအလျှောက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း, ပေါင်းစုဟာ့ဒ်ဝဲ setup ကို; LTC timecode ၏အလိုအလျှောက်အသိအမှတ်ပြု; သင့်ရဲ့ preference ကိုကိုက်ညီဖို့နဲ့နောက်ထပ် Workspace ကိုစိတ်ကြိုက်။
TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကို $ 1,995 အမေရိကန် MSRP မှာတစ်ကြိမ်တည်းဝယ်ယူအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိ TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကိုဖောက်သည်တစ်ဦးအခမဲ့ upgrade အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ကြသည်။ TriCaster အဆင့်မြင့် Edition ကို TriCaster 8000, TriCaster 860, TriCaster 460, TriCaster 410 နှင့် TriCaster Mini ကိုနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာစျေးနှုန်းကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက NewTek ထုတ်ကုန် visi စိတ်တော်t www.newtek.com, NDI ™အကြောင်းကို, visi စိတ်တော်t ndi.newtek.com.
အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ HDMI အိုင်ပီလုပ်ငန်းအသွားအလာ NAB 2016 NDI Network မှစက်ပစ္စည်း Interface NewTek SDI အဆိုပါ NAB ပြရန် TriCaster tricaster အဆင့်မြင့်ထုတ်ဝေ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2016-03-31
ယခင်: VITEC VIDEOCOM'S စက်မှုဦးဆောင်တံဆိပ် NAB ကြမ်းပြင်လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူ
နောက်တစ်ခု: NAB2016: Post ကို | ထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား (P | PW) တစ်ဦးကအစိုင်အခဲသင်တန်းအတွေ့အကြုံ